Air Astana: fampiakarana 10% ny fivezivezena amin'ny mpandeha ary fiakarana 17% amin'ny vola miditra
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Air Astana: fampiakarana 10% ny fivezivezena amin'ny mpandeha ary fiakarana 17% amin'ny vola miditra
Air Astana dia nandrakitra fiakarana 10% amin'ny fivezivezena amin'ny mpandeha ary fiakarana 17% amin'ny fidiram-bola amin'ny tapany voalohan'ny taona raha ampitahaina amin'ny vanim-potoana nifanandrinana tamin'ny taona 2017. Teo anelanelan'ny volana Janoary sy Jona 2018, dia nitondra mpandeha roa tapitrisa mahery ny zotram-piaramanidina.
Ny fitomboan'ny fifamoivoizana dia nateraky ny fampisehoana matanjaka amin'ny fifamoivoizana mpandeha iraisampirenena izay 22% raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny 2017.
Ny fifamoivoizana amin'ny fifamoivoizana iraisampirenena amin'ny tapany voalohany amin'ny taona 2018 dia nitombo 75% ka hatramin'ny 320,000 mpandeha tamin'ny fototra matanjaka tamin'ny taona 2017. Ny anjaran'ny mpandeha fitaterana dia nahatratra 30% ny fifamoivoizana iraisampirenena Air Astana, tafakatra 21% ho an'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa.
Ny fahaiza-manao dia nohamafisina 8% vokatry ny fampidirana sidina vaovao avy any Astana mankany Tyumen sy Kazan, ary koa ny refesina fanampiny avy any Astana mankany London Heathrow (isan'andro izao), Omsk, Dubai, Delhi, ary avy any Almaty mankany Dushanbe, Baku, Hong Kong, Seoul ary Bishkek. Nisy tolotra fanampiny nanampy an'i Beijing, Moskoa, St. Petersburg ary Kiev avy amin'ny foibe roa. Ankoatr'izay, ny 26 martsa lasa teo dia nanangana serivisy vaovao Atyrau-Frankfurt-Atyrau ny zotram-pitaterana an'habakabaka.
Tamin'ny volana martsa, namarana ny fifanarahana codeshare nifanaovana tamin'ny Cathay Pacific ny Air Astana, izay nanolotra fifamatorana mety ho an'ireo mpandeha rehefa nandeha nankany Azia sy Aostralia namakivaky an'i Hong Kong, ary lasa 11 izythmpiara-miasa codeshare.
Air Astana koa dia manohy ny programa fanavaozana ny fiaramanidina. Nandray ny fiaramanidina A321neo vaovao telo ho ao anaty fiaramanidina izy ho ampahany amin'ny baiko 17 ho an'ny fiaramanidina XNUMX.
Tamin'ny lohataona dia naniraka ny Ivotoerana Fiaramanidina sy Teknika ao amin'ny seranam-piaramanidina Astana ny seranam-piaramanidina, izay manome fanampiana ho an'ny fikojakojana ny fiaramanidina Air Astana ary mikasa ny hanome serivisy ho an'ireo zotram-piaramanidina fahatelo manidina mankany Kazakhstan. Ny fotodrafitrasa dia nohamafisina bebe kokoa miaraka amin'ny fanampian'ny Sekolin'ny mekanika fiaramanidina vaovao, miasa eo ambanin'ny Lisansa EASA Fizarana 66.
Raha naneho hevitra momba ny valiny i Peter Foster, ny filoha sy ny CEO dia nilaza fa: “Ireo isan'ny mpandeha dia matanjaka hatrany amin'ny fifamoivoizana iraisam-pirenena sy ny orinasan-tserasera. Ny lalam-pirenena sy ny rezionaly isam-paritra dia miatrika ny vidiny lafo sy ny vidin'ny rivotra mahery setra ”